Wasaaradda Waxbarashada & Tacliinta Sare ee Puntland oo magacowday Gudoomiyeyaal & Maamulayaal. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Wasaaradda Waxbarashada & Tacliinta Sare ee Puntland oo magacowday Gudoomiyeyaal & Maamulayaal.
Wasaaradda Waxbarashada & Tacliinta Sare ee Puntland oo magacowday Gudoomiyeyaal & Maamulayaal.
August 11, 2018 - By: Mohamed Dahir
Dhanka kalana Agaasimaha Guud ee wasaaradda waxbarashada Maxamed Cali Faarax ayaa warqad uu xaafiiska wasaaradda kazoo saaray ku magacabay Maamulaha dugsiga Xaaji Mire Boosaaso inuu noqdo Siciid Ducaalle Aadan.
Magacabista waxaa lagu cadeeyey in ay jiraan codsiyo & talo bixino wasaaradda uga imanaya Maamulka waxbarashadda heer gobol,heer degmo iyo gudiyada waalidiinta ee dugsiyada,taasi oo ay ku codsanayaan in maamulka laga badelo,waxaana ay ku sababeyeen hoos u dhac ka Jira dhanka tayada waxbarashadda Ardayda.
Sanad dugsiyeedkan ayaa si weyn waxaa hoosaysay darajada baasitaanka Imtixaanka dugsiyada sare ee Puntland,waxaana wasaarrada u qorshaysan wax kabadelka Maamulka & barayaasha iskuulaadka si loo tayeeyo waxbarashadda ubadka Puntland.